မန္တလေး နန်းတွင်း၌ မီးလောင် - Yangon Media Group
မန္တလေး နန်းတွင်း၌ မီးလောင်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အောင်မြေသာစံ မြို့နယ် နန်းမြို့ရိုးအတွင်းရှိ အမှတ် (၂)ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်း ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေးတပ်ခွဲ ဂိုဒေါင်တွင် ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက် ည ၁၁ နာရီ မိနစ် ၂ဝ ခန့်က မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ အောင်မြေသာစံ မြို့နယ် ဥပုသ်တော်ရပ်ကွက် နန်းတွင်း၊ အမှတ်(၂)ဆက်သွယ် ရေးပစ္စည်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးတပ်ခွဲရှိ ဆက်သွယ်ရေးကေဘယ်လ်ကြိုးများ သိမ်းဆည်းထားသည့် (၁၆ x ၃ဝ) ပေရှိ အုပ်ကြွပ်၊ နံကပ်၊ တစ်ထပ်ဂိုဒေါင် (လူမနေ)တွင် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားကြောင်းသတင်းအရ အောင်မြေသာစံမြို့ နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးထွန်းဝေ၊ အမှတ်(၂)နယ်မြေရဲတပ်ဖွဲ့စခန်း စခန်းမှူး ရဲအုပ်မျိုးညွန့်နှင့် တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ တိုင်းဒေသကြီး မီးသတ် ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးသန်း ဇော်ဦး၊ မြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးမှူး ဦးထွန်းထွန်းလင်းနှင့် သန္ဓေတပ် ဖွဲ့ဝင်၎ဝ၊ အရန်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၅ဝ တို့က မီးသတ်ယာဉ် ၃၅ စီး၊ အုပ် ချုပ်မှုယာဉ် နှစ်စီးဖြင့် ဝိုင်းဝန်း ငြှိမ်းသတ်ခဲ့ရာ အခြားသို့ကူးစက် လောင်ကျွမ်းခြင်းမရှိဘဲ ည ၁၂ နာရီတွင် မီးငြှိမ်းသတ်နိုင်ခဲ့သည်။
မီးလောင်မှုကြောင့် ဂိုဒေါင် အဟောင်း (၁၆ x ၃ဝ)ပေ အုတ်ကြွပ် မိုး၊ နံကပ်တစ်ထပ်နှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်းအဟောင်းများ (သစ်သား၊ အဟောင်းသွပ်)စသည့်များ မီး လောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး မီးလောင်မှုဖြစ် ရသည့်အကြောင်းအရင်းကို ဆက် လက်စုံစမ်းဆဲစစ်ဆေးလျက်ရှိ သည်။ ”တပ်မတော်ပိုင်အဆောက် အအုံဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဒီမီးလောင် မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးတော့ စစ်ခုံတင် ပြီး စစ်ဆေးတာလုပ်မယ်။ အရေး ယူရင်လည်း စစ်ဥပဒေနဲ့ပဲ အရေး ယူမှာပါ။ ဒါက တပ်ကိစ္စဖြစ်နေလို့ ပါ”ဟု ခရိုင်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှ အကြီး တန်းအရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြား သည်။
မီးလောင်မှုကြောင့် (၁၆ဝ x ၃ဝ)ပေ အုတ်ြ<ွကပ်မိုး၊ နံကပ် တစ်ထပ် တစ်လုံးဆုံးရှုံးမှု တန်ဖိုး ကျပ် ၄ဝဝဝဝဝ နှင့် ဆက် စပ်ပစ္စည်းအဟောင်းများနှင့် သစ် သားအဟောင်း၊ သွပ်တန်ဖိုး ငွေ ကျပ် ၂ဝဝဝဝဝ စုစုပေါင်းငွေကျပ် ၆ဝဝဝဝဝ ဖိုးခန့် မီးလောင် ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ မီးလောင်ရာသို့ အလယ်ပိုင်း တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူး ချုပ်ကျော်စွာလင်းနှင့် တပ်မတော် အရာရှိများ၊ တိုင်ဒေသကြီးလုံခြုံ ရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်ကျော်မင်းတို့ လာရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အလောင်းတော် ကဿပဘုရားဖူး ကားလမ်းပြုပြင်မှု ဒီဇင်ဘာလကုန်တွင် ပြီးစီးမည်
ဝါးတင်လာသည့် ယာဉ်တစ်စီး ဘရိတ်ပေါက်ပြီး မင်းလှပွဲဈေးတန်းကို ဝင်တိုက်၊ ငါးဦးသေဆုံး၊ ၂ဝ ဒဏ??
မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်အရေး MoU ရေးထိုးပြီးပြီဖြစ်သော်လည်း ထွက်ပြေး ဘင်္ဂါလီများ ပြန်လည် လက?
ထမံသီ တောရိုင်း တိရစ္ဆာန်ဘေးမဲ့တော၌ ကျားများ ကျက်စားမှု ကင်မရာထောင်ချောက်များဖြင့် စစ်တမ်းေ
စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီး လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီး အသစ် လွှတ်တော်တွင် ကတိသစ္စာပြု လ?
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၏ ရွှေကျင်မီးမျှောပွဲနှင့် ကောက်စိုက်တုတ်ဖြင့် ရိုးရာစိုက်ပျိုးနည်းကို